Umfundi WezesiNtu e-UKZN, uNks Sasha Nordengen-Corris, owenza kahle kakhulu ekubhukudeni.
Umfundi wezeMfundo, uNks Sasha Nordengen-Corris, useke wamela iNingizimu Afrika emiqhudelwaneni yokuntweza nokubhukuda eminingi ezingeni lomhlaba wenza kahle kakhulu.
E-Sanyo Bussan Cup eyayise-Japan, u-Nordengen-Corris waba ngowesifazane ovelele, waphinde waba sethimbeni laseNingizimu Afrika elanqoba ekutshuzeni nasekuntwezeni.
Wayemele iNingizimu Afrika kwi-International Surf Rescue Championships eyayise-North Beach eThekwini, waphuma isibili emncintiswaneni wokutakula ngeshubhu, walala isithathu emunxeni wokutshuza nokubhukuda.
U-Nordengen-Corris ungusomabhizinisi osafufusa njengoba esanda kwethula izimpahla zokugqoka ezibizwa nge-Mackintosh Waterwear ezivikelana elangeni zibe ziphathana kahle.
‘Kunzima ukuqhudelana ezingeni lomhlaba, nokuzilolonga nokufunda,’ kusho yena. ‘Ubudlelwano bami buyaphazamiseka ngenxa yomdlalo wami, izifundo, nezinto zebhizinisi kodwa ngikuthanda konke. Ihora nehora emanzini, nezincwadi noma ne-laptop yami kumnandi. Ngikwazi ukwenza izinto eziningi kanyekanye.’
‘Ngiyohlale ngibonga into engiyifundiswe yimpilo ngokukwazi ukuncelisa amawele ezifundweni nakwezemidlalo. Isisho esithi “abantu abaxakekile bayasebenza” siyiqiniso kimina. Ngihlale ngiphokophele impumelelo kukona konke engikwenzayo. Ngenhlanhla, ngibonga ukuthi nginekhanda elisheshe libambe, okwenza kube lula ukuzifundela uma ngingekho ngiye emiqhudelwaneni ephesheya,’ kusho u-Nordengen-Corris.
Ufisa ukufundisa esikoleni esizimele, aphinde asungule amabhizinisi amabili adayisa impahla noma enze umsebenzi ezinkundleni zokuxhumana. ‘Kuningi engihlose ukukwenza kwezemidlalo. Ngibheke i-World Champs Lifesaving e-Italy ngasekupheleni kwalo nyaka ne-Sanyo Cup e-Japan ngoNhlangulana. Esinye isifiso sami yi-FINA World Champs ngasekuqaleni kwalo nyaka nama-Olympics ngowezi-2024. Bengibheke unyaka wezi-2020 ngamehlo abomvu kodwa ngenxa yokugula, angikholwa ukuthi ngizobe sengilungile kulo nyaka,’ kusho yena.
Eluleka abanye abasubathi nabafundi, u-Nordengen-Corris uthe: ‘Kufanele izinto nizibuke ngeso elihle, yonke into izozenzakalela. Uma ushintsha indlela obuka izinto ngayo, yonke into iyashintsha. Izifundo ziba lula, nakwezemidlalo kube lula. Ungalindi amathuba kepha kube nguwena owadalayo! Kubafundi abenza unyaka wokuqala, ningaziyeki ezemidlalo. Iseluleko sami sithi nihlale nizivocavoca okusiza ngokuthi nibe bukhali enyuvesi.’